ဖုန်မှုန့်အိတ် Frame ကလေပေါ်မှာ
နေအိမ် > ထုတ်ကုန်များ > ဖုန်မှုန့်အိတ် Frame ကလေပေါ်မှာ(20 များအတွက်စုစုပေါင်း ဖုန်မှုန့်အိတ် Frame ကလေပေါ်မှာ ထုတ်ကုန်များ)
ဖုန်မှုန့်အိတ် Frame ကလေပေါ်မှာ - တရုတ်ထံမှထုတ်လုပ်သူ, စက်ရုံ, ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်း
ကျနော်တို့တရုတ်ထံမှ ဖုန်မှုန့်အိတ် Frame ကလေပေါ်မှာ ထုတ်လုပ်သူ & ပေးသွင်း / စက်ရုံအထူးပြုနေကြသည်။ အရည်အသွေးမြင့်မားအဖြစ်အနိမ့်သောစျေးနှုန်းနှင့်အတူလက်ကား ဖုန်မှုန့်အိတ် Frame ကလေပေါ်မှာ / စျေးပေါ, တရုတ်ထံမှအမှတ်တံဆိပ်ဦးဆောင်သည့် ဖုန်မှုန့်အိတ် Frame ကလေပေါ်မှာ များထဲမှ Botou Hengrui Environmental Protection Equipment Co. Ltd. ။
နွေဦးရာသီအားပေးမှုဖြစ်စေခဲ့ပြီးပိတ်စအိတ် Frame က
tag ကို: စတား Angle သံမဏိကေ့အရိုး , Trapezoid သံမဏိကေ့အရိုး , နွေဦးဖုန်ကောက်ခံရေးကေ့အရိုး
tag ကို: ဖုန်မှုန့်အိတ်သန့်ရှင်းရေး , အိတ်တပ်ဆင် Method ကို Filter , အိတ်ဖုန်ကောက်ခံရေးများအတွက် Bag Filter
ချို့ယွင်းချက်နှင့်အတူအိတ်လှောင်အိမ်ကိုသုံးပါ အိတ်လှောင်အိမ် filter ကိုများနှင့်ပြာမှုန်သန့်ရှင်းရေး၏အခြေအနေအောက်မှာ filter ကိုအိတ်အမျိုးမျိုးတို့ကိုစောင့်ရှောက်စေနိုင်သည်ကို installation ကို accessories များတစ်မျိုးဖြစ်ပါသည်။ ဒါဟာ "ဟုအဆိုပါ...
tag ကို: အဆိုပါအိတ်ကိုရှင်းလင်းနည်း , အဝတ်အိတ်ကိုင်တွယ်ရန်ကဘယ်လို , ပိတ်စအိတ်၏ installation Method ကို
အဆိုပါလညျးမီးဖိုအတွက်ဖုန်မှုန့်ဖယ်ရှားရေး filter ကိုအိတ်၏ installation လုပ်ငန်းစဉ်များတွင် 1. အဖြစ်များသည့်ပြဿနာများကို။ 1. ချို့ယွင်းချက်နှင့်အတူအိတ်လှောင်အိမ်ကိုသုံးပါ အိတ်လှောင်အိမ် filter ကိုများနှင့်ပြာမှုန်သန့်ရှင်းရေး၏အခြေအနေအောက်မှာ filter...
ဘိလပ်မြေအဘို့အ PPS ဖုန်မှုန့်အိတ်
tag ကို: စက်မှုဘိလပ်မြေစက်ရုံများအတွက် PPS ဖုန် Bag , ဘွိုင်လာဖုန် Filter ကို Bag , Grey ကလညျးမီးဖိုအတွက်အိတ်စုဆောင်းခြင်းမြေမှုန့်
ဖန်ဖိုင်ဘာ coated ဖုန်မှုန့်အိတ်၏စစ်ထုတ်ပစ္စည်းမြင့်မားသောစွမ်းဆောင်ရည်နိမ့်ခုခံမြင့်မား filtering ကိုတိကျစွာနှင့်ရှည်သောအသက်နှင့်အတူ filter ကိုပစ္စည်းသစ်တစ်ခုအမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်။ ၎င်း၏သာလွန် function ကိုသာမန် filter...
ဘိလပ်မြေဓာတုစက်မှုလုပ်ငန်းများအတွက် PPS ဖုန်မှုန့်အိတ်
tag ကို: စက်မှုအသုံးပြုမှုများအတွက် PPS ဖုန် Bag , ဘိလပ်မြေစက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များဖုန်မှုန့်အိတ် , ဓာတုစက်မှုများအတွက် PPS ဖုန် Bag
နိဒါန်း --- industial ဓာတ်အားပေးစက်ရုံဘိလပ်မြေစက်မှုလုပ်ငန်းများအတွက်မြေမှုန့် filter ကိုအိတ် pps 1.Bag filter ကိုအဓိကအားဖြင့်အပေါ်ယံပိုင်း, ဆေးသုတ်, အော်ဂဲနစ်ပစ္စည်းများများတွင်အသုံးပြုလျက်ရှိ၏ 2.Single ဆန်ခါဖွဲ့စည်းပုံ, UF အတွက် filtrate...
SFF စာအိတ် filter ကိုဖုန်မှုန့်အိတ်
tag ကို: မြင့်မားသောအပူချိန် PPS Filter ကို Bag , စက်မှုဖုန် Filter ကို Bag , Dacron NOMEX ဖုန် Bag Filter
CWF 300 1 FQ filter ကိုပစ္စည်းများ၏အခြေစိုက်စခန်းပစ္စည်း 0.35mm မှ 0.3 တစ်ဦးအထူနှင့်အတူအလတ်စားအယ်လကာလီအဆက်မပြတ်ဖန်ဖိုင်ဘာ၏ twill ဖွဲ့စည်းပုံ, ဖြစ်ပြီး, reactive organosilicon နှင့် polytetrafluoroethylene ရပ်ဆိုင်းမှုနှင့်အတူပြန်လည်ဆုတ်ခွာခဲ့ရသည်။...
tag ကို: Mills က Dedusting Bag , ဖုန်ဖယ်ရှားရေးတို့အတွက် Bag Filter , ကတ္တရာသုံးစက်ရုံ Dedusting Bag
အဆိုပါလညျးမီးဖို၏အမြီးမှာဖုန်မှုန့် filter ကိုအိတ်သန့်ရှင်းရေးလုပ်ဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ? မကြာသေးမီနှစ်များတွင် filter ကိုနည်းပညာ၏စဉ်ဆက်မပြတ်တိုးတက်မှုနှင့်အတူ, ဒါကြောင့်အပေါ်ထိုကဲ့သို့သောပေါင်းစပ် filter...
tag ကို: စာအိတ် Filter ကို Bag , Antistatic polyester Filter ကိုအိတ်ခံစားခဲ့ , Antistatic အပ် Filter ကိုအိတ်ခံစားခဲ့
Frame က: ကာလူမီနီယံဘောင်သို့မဟုတ် 21 မီလီမီတာအထူနှင့်အတူသွပ်ရည်စိမ်သည် frame တစ်ခုစီအတွက် filter အိတ်များ၏ရှေ့မှောက်၌လူမီနီယံ slot ကအတူနေတဲ့သတ္တုမာကြောသည့် filter ကို၏ခွန်အားကိုတိုးမြှင့်, နောက်ကျောများတွင် fixed,...
tag ကို: သံလုပ်ခြင်းစက်ရုံများအတွက် Bag Dedusting , သံမဏိ Rolling စက်ရုံများအတွက် Bag Dedusting , ကွိဘူတာအဘို့မြေမှုန့်ငွေကောက်ခံ Bag
အိတ် filter ကို၏အဆိုပါ filter အိတ်မြေမှုန့်စုဆောင်း၏အဓိကအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ filter ကိုအိတ်ရဲ့အရွယ်အစား၏ဒီဇိုင်းသည် filter ကိုအထည်များဖြတ်တောက်ခြင်းနှင့် filter ကိုအိတ်၏အပြောင်းအလဲနဲ့နှင့်ချမှတ်ခြင်းတင်းကျပ်သောလိုအပ်ချက်များကိုရှိသည်။...
tag ကို: Trapezoid ဖုန်မှုန့်အိတ် , စက်မှု Ladder Dedusting အိတ်၏ဈေးနှုန်း , ဖုန်အိတ်၏ဈေးနှုန်း
လျှောက်လွှာများ scope မြင့်မားတဲ့ silica ဖုန်မှုန့်အိတ်အလုပ်လုပ်ခွအေနအေပိုမိုတည်ငြိမ်စေသည်ဖြစ်သောပြောင်းလဲကျောက်မီးသွေးအမျိုးအစားများကိုမြင့်မားဆာလ်ဖာအကြောင်းအရာနှင့်ကြီးမားသောရေအကြောင်းအရာနှင့်ပတ်ဝန်းကျင်တွင်အလုပ်လုပ်ဘို့သင့်လျော်သည်။...
tag ကို: coated ဖုန်ကောက်ခံရေးပိတ်စ Bag , ဖုန်မှုန့်ကောက်ခံရေးပိတ်စ Bag , High Quality ဖုန်ငွေကောက်ခံအိတ်ဈေးနှုန်း
နည်းပညာဖုံးအုပ်အထူးမြင့်မားသောအပူချိန်အပူရုပ်ရှင်အထည်အိတ်ဖုံးလွှမ်း filter ကိုပစ္စည်း dusting မြင့်ဆီလီကွန်အောက်စီဂျင်ထဲမှာမွေးစားဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ PTFE emulsion meson နှင့် PTFE ရုပ်ရှင် 10mg မှအနိမ့် (8kg ၏ဖိအားသည်းခံနိုင်နှင့်ရုပ်ရှင်ကိုဖယ်ရှား,...
လက်သီးဖြင့်ထိုးနှက် polypropylene အပ်ဖုန်မှုန့်အိတ်ခံစားခဲ့ရ
tag ကို: polypropylene ဖုန် Bag , ဆေးထိုးအပ်လက်သီးဖြင့်ထိုးနှက် Bag ခံစားခဲ့ , နှစ်ဦးကဖုန်ကောက်ခံရေး Bag
ဖုန်မှုန့်ဖယ်ရှားရေးအထည်အိတ်သေးငယ်တဲ့အမှုန်အရွယ်အစား, ခြောက်သွေ့တဲ့မဟုတ်သော fibrous ဖုန်မှုန့်များ၏ဖမ်းယူများအတွက်သင့်လျော်သောခြောက်သွေ့ filter ကိုဖုန်မှုန့် device ကိုအစိတ်အပိုင်းများဖြစ်ပါတယ်။ Dusting အထည်အိတ်များသောအားဖြင့်အထည်အလိပ် filter...
Glass ကိုဖိုင်ဘာခံစားခဲ့ရဖုန်မှုန့်အိတ် needled
tag ကို: 729 ဖုန်မှုန့်အိတ် , 208 ဖုန်မှုန့်အိတ် , Glass ကို Fiber တစ်ခါသုံးဆေးထိုးအပ်ဖုန် Bag ခံစားခဲ့
tag ကို: Glass ကို Fiber ဖုန်မှုန့်အိတ်၏အကျိုးသက်ရောက်မှု , Glass ကို Fiber ဖုန်အိတ်အသုံးပြုခြင်း , High Quality Glass ကို Fiber ဖုန်မှုန့်အိတ်
ဖုန်မှုန့်ကို Catcher ၏ဒီဇိုင်းနှင့်ဖုန်မှုန့်အိတ်များ၏အရေအတွက်အကြားဆက်ဆံရေးတွက်ချက်မှု ပထမဦးစွာဖုန်မှုန့်အိတ်ကိုင်တွယ်၏လေကြောင်းပမာဏယူနစ်အချိန်အတွက်သန့်ဓာတ်ငွေ့ပမာဏဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါယူနစ်တစ်နာရီလျှင်ကုဗမီတာ (m3 / h) သို့မဟုတ်တစ်နာရီလျှင်ကုဗမီတာ...
နွေဦးရာသီအားပေးမှုဖြစ်စေခဲ့ပြီးပိတ်စအိတ် Frame က အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
ဘိလပ်မြေအဘို့အ PPS ဖုန်မှုန့်အိတ် အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
SFF စာအိတ် filter ကိုဖုန်မှုန့်အိတ် အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
လက်သီးဖြင့်ထိုးနှက် polypropylene အပ်ဖုန်မှုန့်အိတ်ခံစားခဲ့ရ အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Glass ကိုဖိုင်ဘာခံစားခဲ့ရဖုန်မှုန့်အိတ် needled အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Glass ကိုဖိုင်ဘာဖုန်မှုန့်အိတ် အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Wholesale ဖုန်မှုန့်အိတ် Frame ကလေပေါ်မှာ from China, Need to find cheap ဖုန်မှုန့်အိတ် Frame ကလေပေါ်မှာ as low price but leading manufacturers. Just find high-quality brands on ဖုန်မှုန့်အိတ် Frame ကလေပေါ်မှာ produce factory, You can also feedback about what you want, start saving and explore our ဖုန်မှုန့်အိတ် Frame ကလေပေါ်မှာ, We'll reply you in fastest.